Apple Inoburitsa Yechipiri Beta yeMacOS Sierra 10.12.6 yeVagadziri | Ndinobva mac
Beta kuburitsa zuva!
Apple yakangoiisa mumaoko evakagadziri yechipiri beta vhezheni ye macOS Sierra 10.12.6 uye mariri zvakajairika bug fixes uye mhinduro kune madiki madudu eiyo yapfuura beta vhezheni akawedzerwa. Mune ino kesi, seku beta 1 ye macOS Sierra 10.12.6, hapana shanduko dzakakosha mukushanda kana maficha nyowani, saka iri mubvunzo wekugadzirisa matambudziko anogona kunge akataurwa mushanduro yapfuura uye nekuwedzera vhezheni kune inoshanda system izvo zvava kusvika kumagumo.
KuWWDC vagadziri vanowanzove nekwaniso yekutanga beta vhezheni yeinotevera vhezheni yeOS, mune iyi kesi tiri kutarisana ne beta 2 uye idzi shanduro dzinogona kusazoenda mberi zvakanyanya Mune ino kesi Apple kuwedzera kune Mac yekuvandudza vhezheni yakaburitsa vhezheni dzeIOS, tvOS uye watchOS, ndiko kuti, ese beta beta vhezheni 2. Zvino zvasara kuti zvionekwe kana mumaawa mashoma anotevera ichaburitsawo mavhezheni evashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta, asi parizvino hapana.
Semazuva ese, zvirinani kugara kunze kweiyi beta vhezheni kana usiri mugadziri, sezvo isu tingave nezvimwe kusawirirana chinetso nemaapplication kana maturusi ebasa atinoshandisa pakombuta. Iyo beta vhezheni dzakaburitswa dzinowanzo gadzikana uye dziine mashoma mabhugi anokanganisa mashandiro asi isu hatifanire kukanganwa kuti iwo beta beta uye zviri nani kungwarira navo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Apple inoburitsa yechipiri beta ye macOS Sierra 10.12.6 yevagadziri
Gadzira rako rako gore neCloudMounter